IATA dia manentana ny fanjakana hanaraka ny fitarihan'ny WHO momba ny dia iraisam-pirenena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » IATA dia manentana ny fanjakana hanaraka ny fitarihan'ny WHO momba ny dia iraisam-pirenena
Airlines • Airport • Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Zon'olombelona • Vaovao lafo vidy • fivoriana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Sports • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny torolàlana WHO dia manolo-kevitra ny "fomba fiasa mifototra amin'ny risika" amin'ny fampiharana ny fepetra mifandraika amin'ny COVID-19 sy ny dia iraisam-pirenena.
Aza mitaky porofon'ny vaksiny COVID-19 ho toy ny fepetra takiana amin'ny fidirana na fivoahana.
Esory ny fepetra toy ny fitiliana sy / na ny fangatahana quarantine ho an'ireo mpandeha vaksiny feno na voan'ny aretina COVID-19 teo aloha tao anatin'ny enim-bolana lasa izay.
Hamarino ny làlan-kizorana hafa ho an'ny olona mbola tsy vita amin'ny alàlan'ny fitsapana mba hahafahan'izy ireo mivezivezy iraisam-pirenena.
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) niantso ny fanjakana hanaraka torolàlana vaovao momba ny fitsangatsanganana World Health Organization (OMS). Ny torolàlana dia manome sosokevitra «fomba fiasa mifototra amin'ny risika» amin'ny fampiharana ny fepetra mifandraika amin'ny COVID-19 sy ny dia iraisam-pirenena. Hatolotra ny komity vonjy taitra iraisam-pirenena momba ny fahasalamana iraisam-pirenena WHO COVID-19 amin'ny alakamisy 15 jolay izao.
Ny WHO manokana dia nanoro hevitra ny governemanta:
Hamarino ny làlan-kizorana hafa ho an'ny olona mbola tsy vita amin'ny alàlan'ny fitsapana mba hahafahan'izy ireo mivezivezy iraisam-pirenena. Ny WHO dia manoro hevitra ny fitsapana rRT-PCR na ny fitsapana antigen ny fitsapana haingana (Ag-RDTs) noho izany antony izany.
Ampiharo fotsiny ny fepetra fitsapana sy / na ny quarantine ho an'ireo mpandeha iraisampirenena “amin'ny fomba miorina amin'ny risika” miaraka amin'ny politika momba ny fanandramana sy ny quarantine dinihana matetika mba hahazoana antoka fa nakarina rehefa tsy ilaina intsony.
"Ireo tolo-kevitra momba ny risika avy amin'ny WHO ireo, raha arahin'ireo fanjakana, dia hamela ny sidina iraisampirenena hiverina ary hampihena ny fahafaha-manafatra COVID-19. Araka ny fanamarihan'ny WHO — ary araka ny fanaporofoana ny angon-drakitra fanandramana farany tany Angletera dia tsy vondrona atahorana mafy ny mpizahatany iraisam-pirenena raha ny COVID-19 no jerena. Amin'ireo fitsapana 1.65 tapitrisa notontosaina tamin'ireo mpandeha iraisam-pirenena tonga tany Angletera nanomboka ny volana febroary, 1.4% ihany no niabo ny COVID-19. Fotoana lasa taloha izay hampiasan'ny governemanta ny angon-drakitra ao anatin'ny dingana fandraisana fanapahan-kevitra miorina amin'ny risika hanokafana ireo sisin-tany ”, hoy i Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.